Soo saaraha iyo Warshada ugu Fiican ee Shuttle Radio |Huaruide
Sidee buu u shaqeeyaa huaruide radio shuttle?
Mabda'a shaqada ee rack shuttle radio wuxuu la mid yahay darawalada ku jira raafka, badiyaa sababta oo ah qaab dhismeedka rafcaanku wuxuu aad ula mid yahay darawalada ku jira raafka.Farqiga u dhexeeya ayaa ah in mashiinnada shuttle-ga raadiyaha ay ka caqli badan yihiin, ka dhaqso badan yihiin, ka ammaan badan yihiin, oo ka saxsan yihiin mashiinnada wadista alaabta.Shuttle-ka waxa ku shaqeeya baabuurka.Forklift waxay alaabta dul saartaa baabuurka, ka dibna badeecadda u soo direysa xagga hoose ee shelf.Geedi socodka oo dhan waa mid aad ammaan ah oo habboon.Ka faa'iidaysiga meel bannaan iyo hufnaanta hawleed ee khaanadaha shuttle waa mid aad u sarreeya, laakiin sababtoo ah shuttles ayaa loo baahan yahay, oo la mid ah semi-otomaatigga ah, kharashka wax gelinta ee khaanadaha waa mid aad u sarreeya.Si loo fududeeyo rarida badeecada, khaanadaha shuttle waxay inta badan ku habboon yihiin qadar yar oo kaydinta alaabta iyo hawlgalka khaanadaha qaboojiyaha.
Raadiyaha shuttle rack wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sare u qaaddo awoodda buuxda ee bakhaarkaaga adiga oo si aad ah u kordhinaya awoodda, yaraynta kharashaadka hawlgalka, iyo kordhinta wax soo saarka, taasoo awood kuu siinaysa inaad si dhab ah u kordhiso booska bakhaarkaaga.Sidoo kale waa xal keeni kara faa'iidooyin waaweyn iyo soo-celin soo jiidasho leh oo ku saabsan maalgashiga.
• Tiknoolajiyada soo daynta batteriga lithium oo waxqabad sare leh.
• Matoor la soo dejiyay oo wax qabad sare leh, tignoolajiyada kor u qaadida gaarka ah 17 nos.tignoolajiyada meelaynta dareemayaasha korantada ee dibadda laga keeno.
• Tignoolajiyada caalamiga ah ee hormuudka ka ah fargeeto ka hortagga isku dhaca.
Tignoolajiyada ka hortagga isku dhaca infrared ee jihada Omni.
① Awood kaydinta oo weyn:
• Nadiifinta dhuuban ee u dhaxaysa 2 palette oo isku haad ah.
• Nadiifinta ugu yar ee u dhaxaysa heerarka, isticmaalka ugu badan ee meel dhererka.
• Looma baahna in la bixiyo marin forklift
② Wax soo saarka sare
• Yaraynta wakhtiga rarka iyo dejinta waa la dhimay, maadaama hawlwadeenku aanu u baahnayn inuu ka shaqeeyo gudaha haadka.
• Dhaqdhaqaaqa xawliga sare ee gudaha ee raking, 60m/min, ka dhakhso badan wiishka fargeetada ee raafka caadiga ah.
③ Ka jaban
• Natiijada faa'iidooyinka hore loo sheegay, oo ay weheliso isticmaalka tamarta, waa dhimista kharashyada, samaynta Pallet Shuttle mid ka mid ah hababka kaydinta is haysta ee ugu waxtarka badan.
• Sababtoo ah qaab-dhismeedka ayaa la dhisay, forklifts uma baahna in ay ku kaxeeyaan haadka, ka fogaanshaha khatarta shilalka.Qaab dhismeedka shafka ayaa ah mid naadir ah oo dhaawacma, taasoo la macno ah in dayactirka lagu hayo ugu yaraan.
⑤ FIFO ama LIFO waa suurtagal
• Wax-soo-saarka cuntada
• Kaydinta Qabow
• Bakhaarka Warshadaha Dharka
• Warshadaha dharka
• Bakhaarka warshadaha dawooyinka
• Shirkadda saadka
Ka baxsan cabbirka
Xawaare Lenze DC24V
Saxnaanta Meelaynta Safarka
Qaybta Wadista Socodka
Habka Xakamaynta Socodka
Xakamaynta adeegga a-adeegga-loop-xidhan
≤5s, saxan qaadis
Korantada Korantada Hoose
DC24V/ Supercapacitor 400F / Charger oo 3 weji ah 380V
Theterical 1 milyan jeer
Dallacaadda tooska ah ee tooska ah
Ku dallaca heerkulka
Dallacaadda tooska ah
Qaab toos ah / Habka gacanta
Hore: Hooyada-Ilmaha Shuttle
Xiga: Baabuurka lagu Hago Tareenka